हेर्नुस् ! लाहुरेको पैसाले फकाएर जग्गा किनिदिन्छु भनेर ठ ग्ने यी युवतीले पत्रकारलाई नै यस्तो ध म्की दिएपछि (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News हेर्नुस् ! लाहुरेको पैसाले फकाएर जग्गा किनिदिन्छु भनेर ठ ग्ने यी युवतीले...
हेर्नुस् ! लाहुरेको पैसाले फकाएर जग्गा किनिदिन्छु भनेर ठ ग्ने यी युवतीले पत्रकारलाई नै यस्तो ध म्की दिएपछि (भिडियो हेर्नुस्)
केही समय अघि जग्गा किनाइदिन्छु भन्दै रुपन्देहीकि गोमा घिमिरे नाम गरेकि एक महिलाले आफ्नो पैसा लगेर फिर्ता नगरेको र जग्गा पनि नदिलाएकोले आफू ठ’गि’एको भने मनोज घले मिडियामा आएका थिए ।
इन्डियन आर्मीका कार्यरत मनोज गोमासगँ चिनजान भने इन्डियामा मै किनेमेलको क्रममा आफ्नै आफन्त मार्फत भएको थियो । चिनजान पछि एक अर्कालाई दिदी भाइको साइनो दिएर बोलेका उनहरु गोमा नेपाल आएर जग्गा राम्रो छो भाइ किन भन्दै भनिन ।
मनोजले पनि बिश्वास गरेर जग्गा किन्नका लागि भनी रुपन्देही भैरहवाकि ती गोमा घिमिरेलाई पैसा पठाइ दिए । तर उनले नत जग्गा किनाइदिइन, न त पैसा नै फिर्ता गरिन । जग्गा नभए पछि आफ्नो पैसा फिर्ता हुनु पर्ने भन्दै गोमा भएको ठाउँ पुग्दा गोमाले उनलाई चेक दिएर पठाईन।
तर उक्त चेकमा हस्ताक्षर नभिलेको भन्दै बैंकले फर्काईदियो । त्यसपछी भने गोमा सम्पर्क बिहिन भइन । मनोज आफुले पठाएको पैसा तथा उनले दिएको चेकको प्रमाण सहित मिडियामा थिए ।
उनी मिडियामा आइ सके पछि भने गोमाकी छोरिले आफू पनि कानुनको बिद्यार्थी भएको भन्दै एकतर्फी कुरा मात्र सुनेर बिना अनुमती आफ्नो परिवारको चतित्र ह”त्या गरेको भन्दै आफू अदालत जाने ध”म्की दिदै फोन सम्पर्क गरेकी हुन । साथै गोमा घिमिरेले पनि आफ्नो चरित्र ह”त्या गरेको भन्दै पत्रकार गंगा लामालाइ ध”म्की दिदै आफ्नो बे’इ”ज्जत गर्ने अधिकार कस्ले दियो भनी विभिन्न अ’प’शब्द प्रयोग गरेकी छिन । आफुहरुले पी”डितको गु’ना’सो मात्र बाहिर ल्याएको तर अनेकौँ आ”रो”प लगाउनु गलत भएको गंगाको भनाई छ
गोमाले पत्रकार गंगा लामालाई पैसामा बिकेर आफुहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै सम्पुर्ण प्रमाण सहित मनोज घलेलाई लिएर भैरहवा आइज भन्दै ध”म्की दिएकी छिन । यस्तै थुप्रै केशहरु यस अघि पनि हुने गरेको पत्रकार गंगाले बताईन । आफू अहिले पनि यस्तै एक ठ”गी केश कै रिपोर्टिङ गरेकै बारेमा आफुलाई मु’द्दा लगाएको र आफू त्यसको तारिकमा आफू अझै पनि धाइ रहेकोले आफुलाई खासै यो कुराले महत्व नराख्ने बताईन । आफू कसैको ध”म्कि”ले नडराउने पनि बताईन ।
आफू स्वतन्त्र मिडियाकर्मी भएको र आफ्नो काम स्वतन्त्र रुपमा घटनाको बारेमा जानकारी गराउने रहेको उनले बताईन । साथै आफुहतु पी”डि”त”कि आवाज सम्बन्धि निकायसम्म पुगोस भन्दै पी”डि’त”लाई न्याय दिलाउनका लागि सहयोग गर्दै आएको हुनाले यस्ता बिना प्रमाणका आरोपहरुले केही गर्न नसक्ने गंगाको भनाई छ । गोमाले ठगी गरेको भनी पीडित ब्याक्ती आफुकहाँ आएको भन्दै आफुले सोही कुरा बाहिर राखेको बताईन । यदि गोमाका पनि त्यस्ता केही गुनासोहरु भए मिडिया आएर राख्न गंगाले आग्रह गरिन ।
Previous articleअझै बिहे गर्ने धोको १०० बर्ष कि आमाको ,१०० बर्ष पुगेकी आमालाइ हेर्दा सबै पिडा बिर्सिन्छ (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleधनगढीमा घ’ट्यो अत्यन्तै दुख’द घ’टना ! सौ’तेनी आमाकोमा बस्दै आएका १० वर्षीय बालक मृ’त फेला